Imfashini phezulu umthwebuli Terry Richardson isithombe
Terry Richardson - photographer American ethandwa, indodana ka-edumile imfashini umthwebuli Bob Richardson. Ngiseyingane wayehlala Paris, New York, iLondon kanye Los Angeles. Kuyo yonke le minyaka, uTerry wenza idumela lakhe lihle, futhi manje usengumfundi likufuna umthwebuli phezulu. Ngo izithombe zakhe amamodeli edume kunazo phezulu, pop izinkanyezi, abaculi kanye izinkanyezi movie.
Umthwebuli Terry Richardson: umsebenzi wakhe
Richardson futhi ukubonakala kwakhe ekhumbulekayo: amadevu, sideburns, plaid amahembe kanye izibuko vintage - kuyinto sibalo ezibalulekile emhlabeni of fashion show ibhizinisi. Phakathi izinkanyezi eziningi ezazisebenza naye, angabizwa ngokuthi Lady Gaga, Georgia Mey Dzhagger, Zhizel Bundhen, Keyt Moss, Lidiyu Herst, Keyt Apton, Miranda Kerr, Rihanna, Will Ferrell, Vudi Allena, Jared Leto, nabanye abaningi, uhlu kuqhubeka ingunaphakade.
Kusukela ekuqaleni kwenkonzo yakhe, yazenzela izimiso ezilula tebuciko, ngokuvamile besebenzisa nezizinda ezimhlophe plain kanye zasesiteji sakugcina for izithombe. Ingabe engasenathonya Amazing Terry Richardson waba nganekwane usaziwayo kwezokuzijabulisa.
Amaqiniso kusukela biography
Terry Richardson Wazalwa ngo-August 14, 1965 eNew York emkhayeni photographer Bob Richardson kanye stylist Enni Lomaks. Ngisho nalapho ngiseyingane wathuthela Paris nabazali bakhe, owadivosa ngokushesha ngemva kwalokho. Ngo-1971, yena nonina wakhe bathuthela Melika.
Terry iseyintsha yayihlala Hollywood, eLos Angeles, wafike waya esikoleni esiphakeme. Ngo-1990, Terry Richardson ukudlalwa amaqoqo ambalwa punk, futhi lapho ngineminyaka engu-nesishiyagalombili, wathatha izithombe. Lona wokuzilibazisa ayinangozi kancane kancane sashintsha saba nesifiso sangempela. Naphezu amahloni, ibhungu abanamakhono nomuzwa wokuthi angakwazi enobuchule yabo ngokusebenzisa izithombe zabo. Ngo-2012, Terry Richardson wethulwa umphakathi embukisweni wakhe wokuqala e-Los Angeles, California.
Ngemva kwesikhathi esithile, umsebenzi wakhe kule nsimu wakhumula lapho ethutha ukuze New York futhi wakholisa magazini Vibe ukudubula uchungechunge izithombe uyise. Naphezu kweqiniso lokuthi lokhu kubambisana aluzange luphumelele, izithombe ezithathwe Terri Richardsonom, aphawula ukuqala i-career grand.
Kancane kancane, waqala sebenzisana nezinkampani eziningi esikhiqiza imikhiqizo fashion ezinkulu, kanye nabaqambi edume kunazo ezifana Yves Sen Loran, Dzhimmi Chu futhi Tom Ford; ne onobuhle ethandwa kakhulu nabantu abadumile, kuhlanganise Lindsay Vikson, Rennes Crystal, Dzheyms Franko, Karl Lagerfeld, Hloya Sevini, Lara Stone. Ngisho uMengameli waseMelika uBarack Obama lathatha lens akhe.
Kusukela elula kuya umsizi lochwepheshe
Terry Richardson, ogama izithombe kuhlobisa nesembozo omagazini fashion ethandwa, waqala umsebenzi wakhe lochwepheshe njengenhlangano elula umsizi, okuyinto kancane kancane wafunda ukuthatha izithombe eziyizungezile, kanye nabantu kamuva. Ngenxa yalokho, waqala ukusebenza ne osaziwayo enkulu Hollywood. Babehlanganisa Leonardo DiCaprio, Lindsay Lohan, Mikki Rurk nabanye. Richardson wenza umsebenzi omningi ezifana brand adumile njengo "Hugo Boss '," Gucci "futhi" Dolce & Gabbana ".
Terry Richardson: izithombe ihlazo
izithombe zakhe ngokuvamile idala kwabangela isasasa elikhulu ngoba abanye ababheke inkanuko sexy ngisho izithombe zocansi. Richardson futhi ngezinye izikhathi enza izinto njengesibonelo futhi ehilelekile ukuthwetshulwa nezigcawu zocansi ahlukahlukene nge kwabesifazane nabesilisa.
Sam Terry Richardson, ogama izithombe ngokuvamile inselele futhi inkanuko, kusho ukuthi lezi zithombe umvumele ukuhlola yobulili bakhe, ngaphezu kwalokho, ngokucacile akuyona namahloni mayelana nokubonisa umzimba wakho ku izikhundla ezicace kunazo.
Ngo-2010, wabekwa icala zokuxhaphaza ngokocansi imifanekiso abasha. Richardson waphendula esidlangalaleni lezi zinsolo, zathi kwakungamanga ngokuphelele futhi linesisekelo. Izithombe Richardson, okungukuthi izithombe zakhe ezinenhlamba, njalo yabangela impikiswano ngoba iningi umsebenzi wakhe.
Kuyini ukuchayeka? Kwezinye izimo, lo msebenzi isetshenziswa, futhi noma ngabe kudingekile ikhamera?
Portrait lens kanye nezici zayo
Kuvele ezithakazelisayo isithombe phrojekthi: ezweni elikhulu evulekile ngezimoto ezincane
Lubhalomagama, ukuphrinta ifilimu self-Yesigcilikisha, uzitholele banner
Osayizi izithombe, athembele amathekhiniki sokudubula
Pinkhassov George. Biography nomsebenzi othatha izithombe
"Mashi ilanga": indaba ifilimu KF Juon
Lapho bangabeki ebusika? Ngasekupheleni adventure!
Njengoba kwakhiwa esifushane isakramente it is
Shtreyher Yulius: Biography. Streicher isehlakalo
Quince ujamu ulamula kanye ziyadliwa: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Izimpawu eyinhloko vasculitis
I-URL yesithombe: kanjani ukuthola nge ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa?
Modulus okunwebeka ngokhonkolo: lokho futhi uwuchaza kanjani?